Lionel Messi Oo Tababarihiisa Ernesto Valverde Hal Arin Ugu Cadhaysan Iyo Khilaafkii Ugu Horeeyay Oo Soo Bixi Doona Haddii Valverde Uu Go’aankiisa Ku Adkaysto. – WWW.Gool24.net
Lionel Messi Oo Tababarihiisa Ernesto Valverde Hal Arin Ugu Cadhaysan Iyo Khilaafkii Ugu Horeeyay Oo Soo Bixi Doona Haddii Valverde Uu Go’aankiisa Ku Adkaysto.
Lionel Messi iyo macalinka kooxdiisa ee Ernesto Valverde ayaa xili ciyaareedkan ku wada bilawday xidhiidh fiican kadib markii uu Luis Enrique ka badalay shaqada Camp Nou. Laakiin waxaa soo baxaya waxyaabo uu Lionel Mess kaga cadhaysan yahay Valverde oo haddii ay sii socdaan keeni kara khilaafkii ugu horeeyay ee dhex mari kara macalinka ree Spain iyo Messi.
Wargayska Spain ka soo baxa ee Don Balon ayaa ku waramay in Lionel Messi oo ka cadhaysan yahay aaminaada uu Valverde u hayo Andre Gomes iyo in uu ku fikirayo in suuqa bisha January uu Barcelona ka fasaxo Denis Suarez. Wargayska Don Balon ayaa sheegay in Lionel Messi uu xidhiidh fiican la leeyahay Denis Suarez isla markaana aanu kalsooni ku qabin Andre Gomes, sidaa daraadeedna, uu Valverde kaga cadhaysan yaahy go’aankiisan.
Lionel Messi ayaa xidhiidh dhaw la leh Denis Suarez oo marka fursad la siiyo ay Messi si fiican kubbada iskugu fahmaan halka Andre Gomes uu yahay mid aan muujin tayadii laga filayay tan iyo markii uu Luis Enrique ka soo bixiyay 30 milyan ee gini.
Waxaa jiray warar soo baxay oo sheegay in Andre Gomes uu sirta Lionel Messi u gudbiyo xidiga ay isku qaranka yihiin ee Cristiano Ronaldo halka sidoo kale ay warbaahinta Portugal qortay in Andre Gomes uu Messi ku eedeeyay in uu soo xusho shaxda kooxda Barcelona inkasta oo uu Gomes arintan si cad u beeniyay.
Laakiin Lionel Messi ayaa doorbidaya in halkii uu Gomes kooxda ka sii joogi lahaa ee Denis Suarez la iibin lahaa in taas badalkeeda uu Gomes kooxda ka bixi karo isla markaana uu Denis Suarez kooxda ku sii nagaado taas oo ah mid ay ku kala aragti duwan yihiin Valverde.
Jamaahiirta Barcelona iyo ciyaartoyda kooxda koowaad ayay lama filaan ku noqotay in Valverde uu kulamadii Atletico Madrid iyo Athletic Bilbao uu shaxdiisa ku soo bilaabay Andre Gomes. Denis Suarez oo markii labaad dib ugu soo laabtay Barcelona ayaan wali helin fursad buuxda waxaana doonaya kooxaha Juventus, Tottenham iyo West Ham.
Si kastaba ha ahaatee, xidiga ree Spain ee Denis Suarez ayaa helaya taageerada xidiga Barcelona ugu saamaynta badan ee Lionel Messi kaas oo macalinkiisa Valverde kaga cadhaysan in uu Gomes ka doorbidayo taas oo haddii uu Valverde ku sii adkaysto keeni karta khilaafkii ugu horeeyay ee Messi iyo macalinkiisa.